ANDRIANTSITOHAINA NAINA : “Kandidan’ny fampiraisana mahavita manarina an’Antananarivo”
Mitohy hatrany ny fitetezam-paritra ataon’ny Kandida Naina Andriantsitohaina mandritra izao fampielezan-kevitry ny fifidianana ben’ny tanàna izao. 8 novembre 2019
Tao amin’ ny boriborintany fahadimy indray no toerana notsidihiny, omaly. Nanotrona azy teny an-toerana ny kandida ho mpanolotsaina Rajerison Nicole Véronique sy ny Depioten’ny boriborintany fahadimy, Naivo Raholidina ary ireo lehiben’ny fokontany maro eny amin’iny faritra iny. Nandeha an-tongotra, nitety toerana maro, niditra tany anaty elakelan-trano mihitsy izy ireo nandritra ity fidinana ifotony natao ity nihainoana ny olan’ny mponina. Isan’ny fokontany notsidihina ny tao Andraisoro, Tsarahonenana ary Ampandrianomby sy ny manodidina. Nisy ny famelabelaran-kevitra nataon’ny Kandida Naina Andriantsitohaina tao Tsarahonenana. Nandritra io koa no nihainoany ny olan’ny mponina.
Nampitaraina ireo mponina eny an-toerana ny mahakasika ireo tanin’ny kaominina eny amin’iny faritra iny nisy nivarotra an-tsokosoko lasa fananan’ olon-tokana, ny jiro tapaka lava sy ny rano ilaharana andro aman’alina, ka nangataka tamin’ity kandida ity izy ireo mba hijery akaiky ny mahakasika izany. Namaly ny hetahetan’izy ireo avy hatrany ny Kandida laharana fahefatra ary nanipika mazava fa ny tanin’ny kaominina rehetra dia tsy maintsy averina amin’ny kaominina avokoa. Tsy ekena, hoy izy ny fanaovana kolikoly sy kitranoantrano amin’ny fitantanana ny fananan’ny kaominina. Hisy araka izany ny fananganana fotodrafitrasa vaovao hamatsiana rano fisotro madio ho an’ny mponina. Hametrahana jiro mandeha amin’ny herin’ny masoandro koa ireo faritra maro mila izany. “Mila ben’ny tanàna mandray andraikitra isika, manome vahana ny hasin’ny vahoaka ary afaka mihaino ny olany, ka manasa anareo aho hifidy ny laharana fahefatra”, hoy ny Kandida Naina Andriantsitohaina. Nanentana ny mpifidy koa izy hifidy ireo mpanolotsaina miara-dia aminy.
Mila rivo-baovao Antananarivo
Nanentana ireo vahoakan’ny boriborintany fahadimy koa ny Depiote Naivo Raholdina, hifidy ny laharaha fahetra. Nambarany fa kandidan’ny fampiraisana ny kandida Naina Andriantsitohaina. “Efa nifidy ahy ianareo nandritra ny fifidianana depiote, mahatoky ahy ianareo aho ary izaho ka mahatoky anareo, mifampatoky isika, ka izany no hanolorako anareo azy. Ny fampandrosoana an’Antananarivo no tanjona iraisantsika. Fidio izy fa izy no kandidan’ny fampiraisana mahavita manarina an’Antananarivo”, hoy ny Depiote Naivo Raholidina.
Efa nitsidika ity toerana ity ihany ny kandida Naina Andriantsitohaina talohan’ny fampielezan-kevitra ary izao niverina nanamafy ny fahavononany hiara-hiasa amin’ny boriborintany fahadimy izao indray. “Mila rivo-baovao ny fitanantana an’Antananarivo, mila fanovana ary mila olona mandray andraikitra amin’ny lafiny rehetra. Tsy hamitaka anareo aho”, hoy hatrany ny fanambaràn’ny Kandida Naina Andriantsitohaina.